Ungayifaka Kanjani Ukubopha Inja Ngendlela Efanele (Isinyathelo Ngesinyathelo) - Ezempilo
Ungayifaka Kanjani Ukubopha Inja Ngendlela Efanele (Isinyathelo Ngesinyathelo)
Uma ungumnikazi wenja, kunethuba elihle lokuthi uzosebenzisa amahanisi enja ngesikhathi esithile empilweni yabo.
Ungasebenzisa eyodwa ukuhamba.
Kwesinye isikhathi kungadingeka ukuthi usebenzise eyodwa ukuvikela inja yakho ngesikhathi sokuvakasha.
Kunoma ikuphi, uzofuna ukwazi ukuthi ungayifaka kanjani. Hhayi lokho kuphela, kepha mhlawumbe uyazibuza ukuthi iyiphi oyothenga nokuthi ungathola kanjani usayizi ofanele?
Ngakho-ke sihlanganise umhlahlandlela wokugcina wamahhanisi ezinja!
Lapha sizophendula yonke imibuzo yakho ejwayelekile, sikunikeze ithuba elihle kakhulu lokuba nenja ejabulayo ku-harness efakwe kahle!
Ungayifaka Kanjani Ibhande Lenja: 12 Umhlahlandlela Wezinyathelo
Izinhlobo Zama-Harnesses ezinja
I-Standard Dog Harness
Isinyathelo-In Dog Harness
I-Front Clip Inja Yokubopha
Ukulinganisa i-Dog Harness
Ungayifaka Kanjani Inja Amahanisi?
Kufanele Ilingana Kanjani?
Kufanele Uzibekephi Izintambo?
Kufanele Uyilungise Kanjani?
Lapho usuthengile amahhanisi akho, khipha emaphaketheni, bese uwashiya phansi ukuze inja yakho ihlole futhi ihogele.
Ukuphonsa ngokungahambisani nokuya ngasethunjini.
Yenga inja yakho ibheke ihhanisi ngokwelashwa bese uqhubeka nanoma yini obukwenza.
Uma inja yakho ingakhathazeki nakancane, ungazama ukwethula amahanisi.
Ngamahhanisi angaphezulu, linda ikhanda lakhe emgodini ngomuthi. Yikhumule futhi uvuze. Phinda izikhathi eziningana.
Ngensimbi yokubopha, yishiye phansi bese uyenga ukuthi ahambe phezu kwayo. Umvuzo. Phinda.
Ngemuva kwemizamo eyi-10 yokulungisa ingxenye yokuqala yehhanisi nokususwa masinyane, beka amahanisi emzimbeni bese uvuza. Phinda.
Ekugcineni, vikela iziqeshana. Umvuzo.
Mnike ukuhlafuna noma ikong ukubaphazamisa ekuboshweni kwabo. Phinda lesi sinyathelo esikhathini sezikhathi eziyi-10 ngaphezulu.
Vumela inja ukuthi ifake amahanisi endlini. Ungamnika nokudla noma ukuhlafuna ngenkathi ekugqokile ukumsiza ukuthi ajwayele. Isuse ngokushesha lapho iqeda.
Uma esekwamukelile, namathisela i-leash bese uhambahamba uzungeze indlu noma igceke. Umvuzo njalo.
Uma uqiniseka ukuthi uyamukele, phumela ezweni elikhulu elibanzi. Amathuba ukuthi, uzoba nentshisekelo kukho konke okunye okwenzekayo, ngeke aze aqaphele ukuthi ukugqokile.
Hhayi njengoba kulula njengoba iningi lethu belicabanga, lapho uqala ukucwaninga ama-harnesses ezinja uzobona ukuthi kunezinhlobo ezimbalwa ezihlukile:
Uhlobo lwehhanisi olikhethayo luzoya ngezici ezahlukahlukene ezibandakanya: isimo sabo, isimo sabo nempilo yabo:
Izinja ebezinezinkinga zezempilo eziphathelene nentamo yazo zivame ukubonwa kuma-harnesses wesifuba esiphambanweni (ngena phakathi noma ngaphambili kwesiqeshana).
Izinja ezinkulu kwesinye isikhathi kutholakala kuma-harnesses angaphambili njengoba kuvame ukutshelwa ukuthi basebenzise ukuhola okuqeqeshwa okunamathiselwe ngaphambili nangemuva okunganciphisa ibhalansi inja uma kuba nzima ukuphatha.
Izinja ezingaba novalo noma eziqaphile zivame ukungabaza ukuzungeza i-harness ephezulu.
Ake sibheke i-harness ngayinye nokuthi singayifaka kanjani ngokuphepha nangendlela efanele.
Inja yakho yokubopha ejwayelekile idizayini elula.
Amanye amadizayini abopha ngemuva entanyeni, futhi azungeze ibhande lenja, amanye abambelela kuphela ebangeni.
Imichilo ivame ukwenziwa ngenayiloni futhi iyakwazi ukuguquguquka ngokuphelele.
Bafika ngemibala ehlukahlukene futhi imvamisa banendandatho eyodwa engu-D yokunamathisela ukuhola, imvamisa ihlala emhlane wabo.
Ukulinganisa Leli Bhande
Ukulingana leli bhande, kuzodingeka ulinganise ibhande, intamo nesifuba senja yakho bese uzifanisa nemihlahlandlela yabakhiqizi.
Lungisa imichilo ukuze ilingane inja yakho kepha kufanele ukwazi njalo ukuthola iminwe emibili phakathi kwehhanisi nenja yakho nganoma yisiphi isikhathi.
Okokubopha inja okujwayelekile, noma ngabe unesiqeshana sentamo, abanikazi abaningi bakhetha ukugcina isiqeshana sentamo silungisiwe ukuze usilinganise njengehhanisi elingaphezulu kwekhanda.
Umane ushelele imbobo yentamo phezu kwekhanda labo, ulandele imichilo ngaphansi kwesifuba, bese uqondisa imichilo phezulu uzungeze ibhande.
Qinisekisa ukuthi zonke izintambo ziyisicaba emzimbeni futhi azisontekile.
I-step-in harness ilungele izinja eziqaphela kancane amahhanisi angaphezulu kwekhanda.
Lo mklamo unezimbobo zezidladla, bese iziqeshana zibopha ngaphezulu kwamahlombe. Kungaba yinkohliso encane ukuthola lokhu ngendlela efanele.
Njengoba beza nezintambo eziguquguqukayo, uzobalinganisa esifubeni sabo naphezu kwamahlombe abo.
Futhi, udinga ukukala ibhande nesifuba senja yakho ukufanisa izilinganiso zomkhiqizi. Yize abakhiqizi abaningi bekhomba abalimi abanconyelwe ukubopha kwabo ngosayizi ngamunye.
Ezinye izinja zifunda ngokushesha okukhulu ukudonsa amahlombe azo ziye phambili ku-harness, ziphunyuke kalula, ngakho-ke udinga ukuhlola njalo ukuthi kufanelekile yini.
Futhi, kufanele kube kuhle kodwa kufanele ukwazi ukulinganisa iminwe emibili phakathi kwehhanisi lakho nenja nganoma yisiphi isikhathi.
I-harness yesiqeshana sangaphambili imvamisa ukukhetha kwabanikazi bezinja abakhulu ukuqeqeshwa.
Batshelwa ukuthi basebenzise i-leash ephela kabili. Namathisela umkhawulo owodwa ngaphambili kwehhanisi nomunye umkhawulo ngemuva kwehhanisi. Umqondo ngukuthi ungayilinganisela-inja uma iba nzima ukuphatha.
Kukhona futhi lo mbono we-reflex yokuphikisa , okungokwemvelo ukucindezela noma ukudonsela entweni edudulayo noma edonsayo.
Ngakho-ke, ngokuba nezindawo ezimbili zokulawula, umela ithuba lokuqondisa inja yakho ekuziphatheni okufunwayo. Abanye abanikazi bathanda umbono wokuba nezindawo ezimbili zokuxhumana nenja yabo ukuze baphephe.
Ama-harnesses wama-clip wangaphambili eza ngobuningi bemiklamo, ejwayelekile, yokungena ngaphakathi nangaphezulu. Ubungalinganisa leli bhande eliqonde ngqo ekwakhiweni.
Ihhanisi elingaphezulu livame ukufika ezinhlotsheni eziningi zemiklamo, ngakho-ke uma ufuna inja yakho iklwebhe imfashini yakamuva, uthole amathuba amaningi okuthola iphethini enhle kulehhanisi.
Amahhanisi angaphezulu avame ukuba namaphakethe amaningi emzimbeni futhi, ngakho-ke kuvame ukukhethwa ukuze kududuzeke.
Lapho uthenga i-harness ephezulu, uzodinga ukukala ibhande nentamo yenja yakho ukufanisa izinkombandlela zomkhiqizi.
Njengoba igama liphakamisa, inja yakho ifaka ikhanda layo emgodini wentamo, bese wena uvikela amahanisi ngeziqeshana entanjeni yebhande.
Nazo zinemichilo eguquguqukayo ngakho-ke qiniseka ukuthi uyaziguqula ukuze zilingane nenja yakho futhi uphinde uqinisekise ukuthi ungafaka iminwe emibili phakathi kwenja yakho kanye nehhanisi nganoma yisiphi isikhathi.
Uma uhlela ukuthatha inja yakho eduze kwamanzi, amahanisi angaphezulu kwekhanda angumklamo ofanayo kumajakethi amaningi empilo, ngakho-ke ngokwethula inja yakho kulo mklamo ume ithuba elingcono lokuthi bamukele ijakhethi yempilo ngokuhamba kwesikhathi.
Eminye imiklamo ine-V shape padding esifubeni, eminye izoba nebhande eliqondile ngaphesheya kwesifuba. Abanye bamane babhince ibhande; kanti ezinye zizoba nokugoqeka ngemuva ngezibambo ezingeziwe zokubamba.
Lokhu kudumile ngezinhlobo ezinkulu noma lezo zinja ezinamaselula amancane uma udinga ukubasiza bakhuphule izinyathelo noma bangene noma bangene ezimotweni.
Okokuqala udinga ukukala ibhande lenja yakho noma phakathi kwabo. Lokhu kungemuva nje kwemilenze yabo yangaphambili. Kuyingxenye ebanzi kakhulu yesifuba senja yakho.
Ngemuva kwalokho udinga ukukala isifuba sabo, futhi ekugcineni ulinganise entanyeni yabo, kusukela ethanjeni lesifuba nxazonke.
Abenzi ngokuvamile baneziqondiso zabo zokuzalela kepha khumbula ukuthi zonke izinja zehlukile futhi uma unenja yomklami, usayizi wazo ungahluka ngokuphelele!
Ihhanisi kufanele linqotshwe, kepha kufanele ukwazi ukulinganisa iminwe emibili phakathi kwenja yakho nehhanisi nganoma yisiphi isikhathi.
Idizayini izokutshela ukuthi ungabeka kuphi imichilo. Imiklamo eminingi iqukethe imichilo yentamo neyebhande, kepha eminye izoba nemichilo yesifuba. Qinisekisa ukuthi yonke imichilo ilele phansi futhi ayisontiwe.
Beka amahanisi enjeni yakho bese ugoqa imichilo ngezilengisi.
Bheka ukulingana njalo, ikakhulukazi uma unomdlwane okhulayo!
Izinja ezisebenzayo inganciphisa isisindo okusho ukuthi i-harness ihamba kancane, izinja ezindala zingathola isisindo ngenxa yokunyakaza okulinganiselwe ngakho-ke kufanelekile njalo ukukhumbula.
Ukulingana okungalungile kungadala ukucasuka nobuhlungu:
Uma iqine kakhulu ingakhawulela ukunyakaza.
Uma ikhululeke kakhulu, inja yakho ingaphunyuka.
Uma ubona amabala anempandla koboya, amakhwapha abuhlungu noma isifuba, noma ushintsho ekunyakazeni, udinga ukuhlola ukuthi ihhanisi lilingana kahle yini.
Kungani Kubaluleke Kangaka Ukwazi Ukugqoka Kokubopha Inja?
Awusoze wazi ukuthi uzodinga nini ukumvikela kwezokuthutha futhi ukumsebenzisa kuyindlela kuphela.
Futhi, uma inja yakho iba nezinkinga zempilo, ayisakwazi ukukhishwa yikhola, ngolunye usuku kungadingeka ukuthi usebenzise ihhanisi.
Kuhlale kungcono ukuthi uyiqeqeshe njengomdlwane ngendlela ezolile futhi elawulwayo.
Ngabe Ukubophela Inja Kungcono Kunekhola?
Ukuthi ukhetha ukusebenzisa i-harness kungukukhetha komuntu ngamunye.
Akunakuphikwa lawo mahhanisi abangela ukuhlukumezeka okuncane entanyeni yenja kunekhola.
Kodwa-ke, izinja zisengadonsa i-harness ngakho-ke uma ufuna isisombululo senja edonsa, khetha ukuqeqeshwa esikhundleni salokho.
Ikhola ingafakwa ngaso sonke isikhathi namathegi wabo wokuhlonza, ngakho-ke uma inja yakho iphuma, unethuba elingcono lokuphinde umthole.
Ingabe ukubopha inja kuzomisa ukudonsa inja?
Cha. Ukuqeqeshwa okuholile kumisa ukudonsa inja.
I-harness ikhawulela ukuhlukumezeka entanyeni yenja edonsa, ngakho-ke uma usebenza ngokuqeqeshwa, i-harness iwusizo oluwusizo.
Ama-harnesses ngokuvamile ayindlela enhle kulezo zinja ezidonsa ku-leash yazo lapho zihamba.
Hhayi ngoba bexazulula inkinga, kepha basabalalisa umthelela wokudonsela esifubeni sabo ngokungafani nokukhawulelwa ezintanyeni zabo ezibuthakathaka ngendlela emangalisayo.
Yiluphi Uhlobo Lokubopha Inja Olungcono Kakhulu?
Amahhanisi owakhethayo azoncika ebangeni lezici.
Uma inja yakho ixwayile, ingahle ibe madolonzima nge-harness ephezulu. Uma kungenzeka bazame ukweqa, i-step-in harness akuyona inketho enhle.
Izinja zokubopha izinja ziza ngemibala ehlukahlukene, imiklamo, nezintengo.
Khetha eyodwa evumelana nawe, inja yakho nebhajethi yakho. Qaphela lapho uzobe usebenzisa khona futhi. Uma kuzoba nodaka, kulula ukuwasha; ingabe izokoma ngokushesha ngokwanele ohambweni lwakho olulandelayo?
Noma ikuphi ukubopha inja okukhethayo, qinisekisa ukuthi uyalinganisa inja yakho ukuze ilingane kahle.
Yethula ihhanisi kancane, ngemivuzo eminingi nokukhuthaza.
Yiba nesineke futhi ukhumbule, i-harness iyithuluzi nje ohambweni lwakho lomzali wesilwane. Akukona ukulungiswa komlingo kokudonsa!
Sazise uma usebenzisa ihhashi lezinja kumazwana angezansi.
UDapple Dachshund: Umhlahlandlela Wokuzala Inja We-Ultimate Dapple Doxie
Uhlobo lwezinja olunamazwi kakhulu luyaphila: Konke Mayelana neHusky yaseSiberia
umalusi waseJalimane oxubene ne-pitbull
umalusi waseJalimane omnyama nampunga
izithombe ezibomvu zempumulo abesifazane besifazane
Ukuxubana kwe-husky ne-blue pitbull
ibukeka kanjani i-brindle yombala